၎ ။ အမဲမိုးခိုသား ကို ဆား ၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့် အနည်းငယ်ဖြင့် အရသာသွင်းပြီး ဒယ်အိုးကို အပူပေးရျွ် သံလွင်ဆီ အနည်းငယ်ဖြင့် ၃ မိနစ် ခန့် တစ်ဖက်စီ အိုးကပ်ကင်ပေးပါ ၊ နှစ်သက်သော အနေအထားသို့ ကျက်လျှင် မီးဖိုမှဖယ်ခွာရျွ် ၅ မိနစ်ခန့် အအေး ခံ ထားပြီး အသင့်ပြင်ဆင်ထားသော အာလူး ၊ ပဲသီးစိမ်း တို့တို့ နှင့် တွဲဖက်တည်ခင်းပါ။
Sprinkle steaks with remaining some salt and pepper. Heatacast-iron skillet over medium-high heat. Coat pan with some Olive Oil . Add steaks to pan; cook3minutes on each side or until desired degree of doneness. Let stand5minutes then serve with Balsamic Beans and roasted Potato.
အမဲမိုးခိုသား ဆိုသည်မှာ အလွန်နူးညံ့ပြီး အရသာကောင်းသော အသားပိုင်းဖြစ်ပါတယ်….ပရိုတင်း ပါဝင်မှု့ များ သလို အစာကြေလည်းလွယ်ပါတယ်….ပဲသီးစိမ်း ကတော့ အမဲသား နှင့် အနီရောင် အသားများ အတွက် အလွန်လိုက်ဖက်ပြီး ဗီတာမင်ပြည့်ဝတဲ့ အစ်ိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်မျိုးပါ…ကာဗိုဟုိက်ဒရိတ် လို့ ခေါ်တဲ့ ကစီ ဓါတ်ကိုတော့ အာလူး ကရရှိနိုင်ပါတယ်၊ ဒီ ဟင်းလျှာအတွဲအစပ် က ကျန်းမာရေး အတွက်သင့်တော်ပြီး အာဟာရ ပြည့်ဝရျွ် ပရိုတင်းကြွယ်ဝတဲ့ အမဲမိုးခိုသား ၊ ဗီတာမင် ပြည့်ဝတဲ့ ပဲသီးစိမ်း နှင့် ကစီဓါတ်ပြည့်ဝတဲ့ အာလူး တို့ နဲ့ တွဲဖက် ထားပါတယ် ၊ ပဲသီးစိမ်း ကို ဝိုင်နီရှာလကာရည် နဲ့ ချက်ထားတာကြောင့် အစာကြေလွယ်ပြီး အနံ့ အရသာ လည်းထူးခြား ပါတယ် ၊ အာလူး ကို အခွံမနွှာဘဲ အလုံးလိုက် ဖုတ်ထားတာကလည်း ကယ်လိုရီ နည်းပြီး ကစီဓါတ်ပြည့်ဝစေပါတယ်၊ သံလွင်ဆီ နဲ့ ဆားလွတ်ထောပတ် အနည်းငယ် သာသုံးထားတဲ့အတွက် မပြည့်ဝဆီ ပါဝင်မှု့ များတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ထိမ်းသိမ်းလိုသူများအတွက်အထူးသင့်တော်ပါတယ် ၊ ကြက်သွန်နီ နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ တို့ က ဆေးဘက်ဝင်ကြ သလို ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီး များကလည်း နှလုံးကျန်းမာရေး ၊ အရိုးကျန်းမာရေး ၊ ရောဂါဘယများအား ကာကွယ်နိုင်ခြင်း များ ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ယောကျာင်္းအားကို ပြည့်ဝစေရျွ် ဗီတာမင် C, E, K, B6, တို့ နဲ့ သံဓါတ်ကဲ့သို့ သတ္ထုဓါတ်များ လည်း ပါဝင် နေတာကြောင့် အလျဉ်းသင့်တိုင်း သုံးဆောင်သင့်ပါတယ်။ )